4Fe (MAYA3)3 → 2 Fe2O3 + 12MAYA2 + 3O2
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 4Fe (MAYA3)3 → 2Fe2O3 + 12MAYA2 + 3O2
Waa maxay xaaladda falcelinta Fe(NO3)3 (iron(iii) nitrate)?
Dhacdada ka dib Fe(NO3)3 (iron(iii) nitrate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 4Fe(MAYA3)3 → 2Fe2O3 + 12MAYA2 + 3O2
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Fe2O3 (iron(iii) nitrate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Fe2O3 (iron oxide) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee NO2 (iron(iii) nitrate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NO2 (nitrogen dioxide) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee O2 (iron(iii) nitrate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh O2 (oxygen) badeecad ahaan?
barium sulfate xabagta barium Oxygen baaruud dioxide
(trung) (trung) (xoog leh) (jacayl, jacayl)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2BaSO4 → 2BaO + O2 + 2SO2
Waa maxay xaaladda falcelinta BaSO4 (barium sulfate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa BaO (barium oxide) iyo O2 (oxygen) iyo SO2 (sulfur dioxide)?
Dhacdada ka dib BaSO4 (barium sulfate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2BaSO4 → 2BaO + O2 + 2SO2
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee BaO (barium sulfate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh BaO (barium oxide) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee O2 (barium sulfate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh O2 (oxygen) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee SO2 (barium sulfate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh SO2 (sulfur dioxide) alaab ahaan?
2MAYA2 + O3 → N2O5 + 2O2
nitrogen dioxide Allena Dinitrogen pentoxide Oxygen
(kh) (kh) (rnn) (kh)
(kanu đỏ) (xanh nhạt) (xoog leh) (xoog leh)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2NO2 + O3 N2O5 + 2O2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee NO2 (nitrogen dioxide) oo ka falcelisa O3 (ozone)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa N2O5 (dinitrogen pentoxide) iyo O2 (oxygen)?
Ozone waxay ku jawaabtaa NO2
Dhacdada ka dib NO2 (nitrogen dioxide) waxay la falgashaa O3 (ozone)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2MAYA2 + O3 N2O5 + 2O2
Su'aalaha la xidhiidha alaabta N2O5 (dinitrogen pentoxide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee N2O5 (ozone)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh N2O5 (dinitrogen pentoxide) alaab ahaan?